Qayb 2aad, Ruuxi ku Dooda Jwx-shiil iyo Kuwa la Socda waxay u halgamayaan dhulka Somalida Ogadeeniya waa beenaale! – Rasaasa News
Qayb 2aad, Ruuxi ku Dooda Jwx-shiil iyo Kuwa la Socda waxay u halgamayaan dhulka Somalida Ogadeeniya waa beenaale!
Jul 10, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo
Qaybtii 1aad ee qormada ciwaanka, waxay inoo joogtay halganka Somalida Ogadeeniya oo mar saddexaad salka dhulka ku dhuftay, ka bib markii ay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] ee 18kii sano ee la soo dhaafay, waday dagaalo kolba heer taagnaa oo ay kala soo horjeeday Itobiya.
Jwxo, oo jirtay 18kii sano ee ugu dambaysay waxay isku dayday sidii ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ku dhaqan dibadaha oo iyagu ah dad ka waayo aragnimo roon, dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee jooga gudaha, ayaan marna si dhab ah ugu guulaysan wayday in ay kasbato dadka aqoonta leh ee Somalida Ogadeeniya. Waxaase u suurto gashay in ay hanato dad xoogaa ah oo aan lahayn fikir dheer oo ay wax ugu qaban karaan halganka Somalida Ogadeeniya. Waxaa run ah oo ay Jwxo ku guulaysatay abaabul ay ku abaabushay taageerayaal, badankoodu ah dad aan waligood arag dhulka Somalida Ogadeeniya oo aan doonaynin in ay tagaan xitaa hadii ay nabad hesho Ogadeeniya.
Abaabulada ay Jwxo ku guulaysatay kagana guulaysatay xukuumada Itobiya, ayaa waxay ahayeen, in ay ka dhaadhicisay dadweynaha ay ababushay ee ku nool dibadaha in ay u tusto in ayna gali karin Ogadeeniya, oo hadii ay galaan garoonka laga qaban lana dili doono.
Arintaas oo ay xaqiijiyeen masuuliyiinta maamulka Kaalinka 5aad ee Somalida Ogadeeniya oo iyaga laftigoodu aad u garasho gaaban, oo dadka dalka u dhashay ee dibadaha ka yimaada u qaatay kuligoodba in ay yihiin Jwxo, waxayna kala daaleen xadhig, sidaas daraadeed waxaa ay dadkii dibadaha xoogsatada ka ahaa ee Somalida Ogadeeniya dhaqaalahoodii u leexiyeen dalalka dariska.
Halkaasna waxaa Jwxo uga suurto gashay in ay Afrika laftigeeda ay ku yeelato taageerayaal xoogan oo soo jiidan kara taageerayaal badan iyo waliba in laga aruuriyo dalalka geeska afrika dadkii ciidanka u noqon lahaa Jwxo.
Jabhadu waxaa ay heshay kaalmo milatari,tababaro iyo mid dhaqaale oo ay si hagar la,aan ah u siisay xukuumada Eritariya, waxayna ku dadaashay dawlada Eritariya in ay Jwxo waxyeelo gaadhsiiso xukuumada Itobiya, laakiin waxaa ururka ka qaloocday Siyaasadii Jabhadnimo, oo ay ka mid ahaayeen;
1.In Eriteriya ay yeelato go,aanka ugu dambeeya ee ururka Jwxo
2.In xukunkii Jabhada uu isubadalo Kali talis
3.Sharcigii Jwxo, oo noqday mid aan jirin
4.Qabyaalad, xad dhaaf ah oo Jwxo dhex mushaaxday
5.Hanti Jabhadeed oo dad lagu maal galiyo.
Kolkii ay intaas oo dhibaato ah ay soo baxday ayaa waxaa la damcay in la xaliyo khilaafka ururka, oo la qabto shir dib la isugu calool xaadhanayo, waxaase sii badatay kala qaybsanaantii, waxaana uu ururku noqday labo garab oo iska soo horjeeda laakiin hal urur ah. Waxaa laba dhinac noqday ragii la is lahaa waa ay ugu murqo kuusan yihiin ururka oo ay ka mid ahaayeen; Dr. Dolal, Diiran, Maadey, Salaaxdiin, Mukhtaar,Hanad iyo Cabaas iyo dhinac kale oo ay ahaayeen Maxamed Ismaaciil, Cadaan, Maxamed Cumar iyo Seedi.
Ururka baan kaa caydhiyey iyo urur baan kaa caydhiyey ayey arintii istaagtay, qir iyo qir iyo qaadan waa, munaafaqu mardabo waligii kama daalo iyo dad iska horkeen. Jwxo-shiil waxaa uu ku guulaystay in uu iska horkeeno saaxiibadii isku safka ahaa ee doonayey in sharciga la, raaco, waxaana shan iyo tobankii sharciga ku taagnay mar labaad laga tuuray labo kaliya, saddex iyo tobankii kalena waxay yidhaahdeen sharci darada ayaa sax ah [Waa yaab tolow muxuu ku akhriyey].
Cadaaladu waa sad weyn, hadii labo ruux oo is haysta ay kuu yimaadaan, oo ay ku yidhaahdaan na kala bixi, waligaa garta ha ugu kala eexan, ogow hadii aad garta eex galiso labada ruux ee aad midna libin siisay midna aad ka qaaday midkoodna ku rabi maayo, waayo kaad ka eexatay wuxuu kugu ogaan in aad ka eexatay oo aadan cadaalad samaynin, kaad u eexatay laftigiisu wuxuu kugu ogaan in aadan ruux cadaaladeed ahayn.
Waxaa cadaaladii ka fogaaday xubno Jwxo-sheegta, oo waliba aad u da,a weyn oo Jwxo-shiil nacay, saaxiibadoodna naceen, walina bulshada ka mid ah, wayna is garanayaan, bulshaduna si fiican ayey u taqaan in ayna wax gal ahayn.
Hadaba, hadii cadaalada laga fogaado maxaa la fishaa, waxaa xaqiiq ah in ayna guuli imanayni. Siyaasad xumo waa uun caqli xumo, xili ah xiliyadii ay aad u wanaagsanaan lahayd in xal loo helo Jwxo, ayaanu la kulmay dad ay isku beel yihiin Jwxo-shiil, waxaan ka codsanay in waxan ay ummadu leedahay, haatana Jwxo-shiil isaga ayaa ugu da,a weyn madaxna u ah ururka ee waa in uu isugu yeedho ummada halganka la leh.
Waxay nagu yidhaahdeen, Jwxo-shiil waan la hadalay oo wuxuu yidhi “reer Cabdile ayaa is haysta anigana iyaga ayaa meesha igu haya”. Waxaanu ugu dambystii ku nidhi arintaasi arin uu yidhaahdo nin masuul ah ma aha idkinka ayaa qaban kara ee qabta, waxayna odayaashii beeshiisu yidhaahdeen ma qaban karo, waxaynase marna joojin khaladkii loo sheegay ee ay ku ogaayeen Jwxo-shiil.
Arintan waxay ahayd labo sano ka hor, hadaba akhristow bal maanta miisaan meesha ay marayso, arintii halganka Somalida Ogadeeniya iyo wanaaga beelaha Somalida Ogaden.
Cxo, waa uu kal dhaqaaqay waayo waxaa dhintay wixii ciidanka isu keenayey, Dadweynihii waa kala dhaqaaqay oo waad ogg tihiin heerka ay xaraaradu marayso, waxaa kale oo aad la socotaan in masuuliyiintii Jwxo-shiil kolkii hore khaladka ku dabo taagnaa in maanta ay gar waaqsadeen, oo aanay jirin cid ay talo isugu imanayaan, marka laga reebo Ina Dhuubo iyo Qaaxo.
Waxaad ogg tihiin dadweynaha Somalida Ogadeeniyow, colaada ay dadweynaha Somalidu u qabaan Jwxo-shiil iyo kuwa la socda oo hadii lagu arko geeska Afrika in la dili. Xitaa shacabkeenii ayaa nacay ururka Jwxo oo aan maanta marti galinaynin, waayo hadii 51kii xubnood heshiin waayeen oo ay xabad isku dhufteen, ma dadweyne ayaa rabi, waa maya.
Gabadh baa bari wiil si khaldan ay wax u dhax mareen markaas ayey tidhi “walaalo ha i sheegin, kolkaas ayuu yidhi hadii ayna shan bilood ku sheegin anigu ku sheegi maayo”. Dhibaatadii ay dad badani lahaayeen war inaga dhexdeenu yaynaa is sheeg sheegin, wataas ceebtii meel walba ay taagan tahay, masuuliyadeeda waxaa leh Jwxo-shiil, dhibaataduna dadkeena ayey haysataa.